मानव सेवा नै जीवन हो – मेरो जीवन – TAJA PATRIKA
मानव सेवा नै जीवन हो – मेरो जीवन
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:३४
समान रूप हेर्नुपर्दा मान्छे को अनेक सपना हरु हुन्छन् मेरा पनि आफ्नो सपना छ्न। जिबन लाई कसरी सार्थक बनाउने भन्ने आफुले देखेको सपना पुरा गरियो भने जिबन सार्थक हुन्छ ।
सपना देख्नु ठुलो कुरा होइन त्यो सपना पुरा गर्न लिने मार्ग र अठोट ठुलो हो। अठोटले मात्रै आफ्नो सपना पूरा हुन्न , सपना पुरा गर्न साधन चाहिन्छ ,उदाहरणका लागि मैले काठमाडौ बाट झापा जाने सपना देखे भने मलाई त्याँ पुग्न कि त हिन्ने उर्जा चाहियो कि त साधन साधन र उर्जा बिना पैसा आउदैन त्यसैले सपना पूरा गर्न कि पैसा चहियो कि अठोट मा यी दुई परिपुरक छ्न ।
एक भए पनि अर्को भएन भने सपना पुरा हुन्न ,म सङ टन्न पैसा छ । दान गर्ने हिग्मत छैन भने के काम ,,? मसङ पैसा छ खर्च गर्ने इक्षा पूरा गर्ने हिग्मत भयन भने के काम,,?
तरीका भएमा सजिलै जीवनको अभिन्न हिस्सा सपना हरू पूरा गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि हामी मानिस आफ्नो काम अनूसार को लक्ष्य बनाउने तयारी भइसकेको हुन्छ ।
भने कतिपय मानिस हरू बिना काम बिना पैसा मा आफ्ना सपना पूरा गर्ने ठुला ठूला जीवनको लक्ष्य बनाएका हुन्छन् । जसमध्ये उनीहरू सफलता हुनै सक्दैन त्यसैले कूनै समय सँगै काम गर्ने अवसर अनूसार आआफ्नो कार्य गर्ने जसको कारण आफ्नो नाम सङ्गै जीवनको कति सपना पूरा गर्ने लक्ष्य आउछ।
मेरो जीवनको लक्ष्य म मध्यम वर्गको परिवारमा जन्मनु मेरो लागि खुशी काे कुरा हो। तर मलाई त्यो पनी थाहा थियो । स्कूल पढ्न पैसा नभएनी ठूलो भएर समान रूपमा समाजसेवी गर्ने मेरो सपना थियो। तर एक दिन मेरो स्कूल मा एक समाजिक यथार्थवादी प्रवृत्ति टपिक पन्ने क्रममा सबै काे जीवनको लक्ष्य शोर्ने कर्म चल्दै गर्दा मैंले आफ्नो कर्तव्य सँगै काम गर्ने र समाजसेवामा मा लागि रहने आफ्नो अनगिन्ती मेरो जीवनको लक्ष्य बताए ।
तर शिक्षक मलाई हेर्दै मुकुराउनु भयो। सायद त्यो मेरो कुरा सम्भव थिएन। उहाले मलाई सम्झाउनु भयो। सो क्रममा अरू मेरो साथी भनाउँदाहरू हाँस्दै जिस्कने संख्या अरुभन्दा बढेको थियो ।
सायद मेरो अरूको भन्दा अर्कै मेरो जीवनको लक्ष्य भएर होला तर त्यो मेरो जीवनको लक्ष्य आज यो समय मा पूरा गरेको छु ।थोरै धेरै भयपनि बिदेशि मुलुकमा कामको शिलशिलामा भेटिएका नेपाली चेलि हरु लाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छु।
जहाँ शर्मा दिमाख खराब भएको यक नेपाली चेलि लाई नेपाल फर्काउन सफल भएकी म आज धेरै खुसी छु । त्यसैले भन्छु खुशी हुनु जिवनको मुख्य उदेश्य हो । एक नेपाली छोरी र अर्काे कुरा यति सानो उमेरमा यती ठुलो समाज सेवि काम गर्ने अवसर जुट्नु आफैं निर्णय गरी अगीबढेर यो जीवनमा किन लक्ष्य बनाउँछ, किन सानै देखि बनाउँछ, किन धेरै बनाउँछ? यो बनाउनुको कारण भविष्यमा गएर राम्रो काम गरी आफ्नो परिवारलाई खुशी पारी राम्रो भविष्य बनाउनका लागि हो ।
मानिसले यो लक्ष्य बनाउनका लागि हो। निस्चित लक्ष्य बनाएर यस्तो फल आउँछ भनेर जीवनको लक्ष्य पहिलेदेखि नै राखेका हुन्छन् ।
मानिसले लक्ष्य दिमाग लगाएर आफ्नो भविष्य उज्ज्वल हुने गरी बनाउँछ । मानिसले यी लक्ष्य आफ्नो जिविका चलाउनको लागि मात्र नभई अरुलाई सेवा गर्नका लागि, अरुको भलाइका लागि पनि सोचेका हुन्छन् ।
ठूला ठूला मानिस सफल हुनुका कारण सानैदेखि लक्ष्य लिएर प्रयास गर्नु हो । मानिसहरु विभिन्न लक्ष्य रोज्छन् तर म समाज कल्याण बन्न चाहन्छु ।
मलाई लाग्छ समाज कल्याण बनेपछि सबै थोक हुन्छ । तर सबै थोक हुन्छ वा हुँदैन म पक्का छैन ।
म त चाहन्छु कि सबै मानिसले बढी मात्रामा समाज कल्याण गरुन् थाेरै धेरै दुःख गरेर खाने सागपात खाएर, पोषणयुक्त खाना खाएर डाक्टरको आवश्यकता नै नपरोस् ।
जहाँ डाक्टर लाई पैसा दिने पैसा समाज काे गरिबी लाई दिन चाहाने मेरो र मेरो , परिवार काे चिन्ता थियो ।आज यो पूरा मात्र नभई सारालाई थाहा भएको छ । मानिस किन गरिब नहोस गरीब उसकाे नाम हो ।
भने गरीबी लाई हटाई आफ्नो काम सँगै नाम बनाउँनु उस्को पहिचान हो । जीवन काे क्रममा सबै लाई खुसी बनाउन सकिन्न ताकी हामि एक घरको परिवार त मिलेर बस्न सकिन्न भने विभिन्न क्षेत्रमा जोडिएको मानिव संग मिलेर काम अनि नाम कमाउन मुश्किल को घडी हो त्यसैले जीवन एक मानव सेवा हो। म यो सेवा जिवन्त सम्म गर्न चाहन्छु ।
सपना न्यौपाने,हाल प्रदेश
समाजसेवी शान्ति महर्जन ग्लोबल इन्टरनेसनल अवार्ड २०२१…
बाध्यतामा अल्झिएको “परदेशी मन”- सपना न्यौपाने
मेरो जीवन खुला किताबजस्तै – रबिन्द्र मिश्र
बाढि जस्तो मेरो जीवन- मेरो जीवन
मेरो जीवनको लक्ष्य
भोलिदेखी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू
स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता , अस्पताल निर्देशक भन्छन् : सरकारले पठाए दिन्छौं
नक्कली नोटको कारोबार गर्ने दुई जना पक्राउ
आज एकैदिन १२ हजार ३३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
किर्तिपुरमा अनलाइन मार्फत जुवा खेलाउने १२ जना पक्राउ